Resident Evil: Vendetta (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
R 2017 97 min Animation
IMDB: 6.3/10 8,326 votes
ဒီကားလေးကတော့ Vendetta ဆိုတဲ့အတိုငျး Actor လေးယောကျရဲ့ အငွိုးတှေ လကျစားခွမှေုတှနေဲ့ ဇာတျကားလေးကတျောတျောလေးတော့ Actionဆနျပွီးကွညျ့လို့ကောငျးမှာသခြောတယျဗြ …
Actor တှကေတော့ Leon S Kennedy , Chris Redfield , Rebecca Chambers နဲ့ Villanကတော့ Glan Arias တို့ပဲဖွဈပါတယျ …
အစိုးရက ဗီလိနျ Arias ကို သတျဖို့ လယောဉျနဲ့ဗုနျးကွဲခိုငျးခဲ့တယျ … ဖွဈခငျြတော့ Arias ကသူရဲ့မင်ျဂလာပှဲဆောငျနဖွေဈနတေော့ သူ့ဇနီးရောမိတျဆှတှေပေါ သသှေားခဲ့တယျ … သူခဈြရတဲ့သူတှသေဆေုံးသှားခဲ့တဲ့အတှကျ အစိုးရကိုပွနျလကျစားခဖြေို့ Virus တှဖေနျတီးပွီးပွနျလကျစားဖို့ကွိုးစားခဲ့တယျ …
Leon ကတော့ သစ်စာဖောကျခံခဲ့ရပွီး သူလူတှေ Bioweapons တှအေဖွဈပွောငျးလဲခံခဲ့ရတယျ …
Chris Redfield က (BSAA) Bioweapon Security Assessment Authority ကပါ … BSSA အေးဂငျြ့တဈယောကျဖွဈတဲ့ သူ့သူငယျခငျြး Cathay White ကလညျး ထိုနညျးတူပဲ Bioweaponsအဖွဈပွောငျးလဲခံရတယျဗြ …
Professor Rebecca Chamer ကလဲ သူ့ Parterသဆေုံးခဲ့တာနကျပတျသတျပွီး အငွိုးတှလေကျစားခွမှေုကတှေ ကနစေပွီးတော့ဇာတျလမျးလေးက Actionဆနျဆနျလေးနဲ့တျောတျောလေးကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ ….
Bioweapons တှအေဖွဈ ပွောငျးခဲ့တဲ့ ဗီလိနျ Arias က လညျး လကျစားခွခေငျြစိတျတှနေဲ့ Virus အသဈတှဖေနျတီးပွီး ဘာတှဘေယျလိုတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာတော့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုကွပါဦးခငျဗြ …
Japan Animation ဇာတျကားလေးဆိုတော့ Graphic ပိုငျးကတျောတျောလေး Goodတယျဗြာ …
အရငျ Resident Evil6ထကျပိုပွီးတော့မိုကျတယျဗြို့ … suggestion ပေးရရငျတော့ တကယျကောငျးတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ …
ဒီကားလေးကတော့ Vendetta ဆိုတဲ့အတိုင်း Actor လေးယောက်ရဲ့ အငြိုးတွေ လက်စားခြေမှုတွေနဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော်တော်လေးတော့ Actionဆန်ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမှာသေချာတယ်ဗျ …
Actor တွေကတော့ Leon S Kennedy , Chris Redfield , Rebecca Chambers နဲ့ Villanကတော့ Glan Arias တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် …
အစိုးရက ဗီလိန် Arias ကို သတ်ဖို့ လေယာဉ်နဲ့ဗုန်းကြဲခိုင်းခဲ့တယ် … ဖြစ်ချင်တော့ Arias ကသူရဲ့မင်္ဂလာပွဲဆောင်နေဖြစ်နေတော့ သူ့ဇနီးရောမိတ်ဆွေတွေပါ သေသွားခဲ့တယ် … သူချစ်ရတဲ့သူတွေသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရကိုပြန်လက်စားချေဖို့ Virus တွေဖန်တီးပြီးပြန်လက်စားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် …
Leon ကတော့ သစ္စာဖောက်ခံခဲ့ရပြီး သူလူတွေ Bioweapons တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခံခဲ့ရတယ် …
Chris Redfield က (BSAA) Bioweapon Security Assessment Authority ကပါ … BSSA အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း Cathay White ကလည်း ထိုနည်းတူပဲ Bioweaponsအဖြစ်ပြောင်းလဲခံရတယ်ဗျ …
Professor Rebecca Chamer ကလဲ သူ့ Parterသေဆုံးခဲ့တာနက်ပတ်သတ်ပြီး အငြိုးတွေလက်စားခြေမှုကတွေ ကနေစပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးက Actionဆန်ဆန်လေးနဲ့တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ….
Bioweapons တွေအဖြစ် ပြောင်းခဲ့တဲ့ ဗီလိန် Arias က လည်း လက်စားခြေချင်စိတ်တွေနဲ့ Virus အသစ်တွေဖန်တီးပြီး ဘာတွေဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျ …
Japan Animation ဇာတ်ကားလေးဆိုတော့ Graphic ပိုင်းကတော်တော်လေး Goodတယ်ဗျာ …
အရင် Resident Evil6ထက်ပိုပြီးတော့မိုက်တယ်ဗျို့ … suggestion ပေးရရင်တော့ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ …
Option 1 storage.msubmovie.com 459 MB SD (480p)
Option2megaup.net 459 MB SD (480p)
Option3uptomega.com 459 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 459 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 459 MB SD (480p)
Option6megaup.net 1.1 GB HD (1080p)
Option7Direct Download 1.1 GB HD (1080p)
Option9sharer.pw 1.1 GB HD (1080p)
Option 10 uptomega.com 1.1 GB HD (1080p)
Option 11 megaup.net 2.7 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 storage.msubmovie.com 2.7 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 13 sharer.pw 2.7 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 14 yuudrive.me 2.7 GB FHD (1080p) DTS 5.1